परियोजनाको तयारी नगरी बजेट दिँदा पूँजीगत खर्च भएन : डा. पुष्पराज कँडेल (अन्तर्वार्ता) | Ratopati
personरासस exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २५, २०७६ chat_bubble_outline0
आयोजनाको कार्यान्वयनमा आउनसक्ने सबै समस्याका बारेमा अहिल्यै परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मुख्यमुख्य समस्या अनुमान गरेर समाधान गर्ने हो । गौरवका आयोजनाको अध्ययन गरेर तीबाट शिक्षा लिने काम पनि हामी गर्छौैं । कहाँनेर हाम्रो कमजोरी भएछ हामी अध्ययन गर्छौं । विगतमा कुनै तयारी बिना आयोजनालाई बजेटमा राख्ने प्रचलन थियो । ती परियोजना कार्यान्वनमा लैजाँदा आवश्यक जमिन प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, ठेक्काको तयारी, मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगायत आधारभूत विषय पूरा भइसकेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाए मात्र तीव्र गतिमा काम हुन्छ । आज परियोजना कार्यान्वयनमा लग्यो, बजेटमा हाल्यो, अर्को आर्थिक वर्षदेखि तुरुन्तै शुरु हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यस्तै कुनै अध्ययन नगरी सधैँ हचुवाका आधारमा योजना हाल्ने गरी जानु हुँदैन, पूरा तयारी गरेर जानुपर्छ भनेर विभिन्न परियोजना अध्ययन गर्ने, तुलनात्मक लाभका आधार तथा आफूसँग भएको साधन र स्रोतका आधारमा परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर परियोजनाको सूची तयार बनाउने काम गरेका हौँ । बजेट अगाडि नै परियोजनाको सूची तयार गर्ने, ‘कोड’ नम्बर दिने, आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने अवस्थासम्मका विभिन्न तहमा छुट्याएर प्रक्रियामा लैजाने सोचअन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै प्रोजेक्ट बैंकको सूची तयार गरेका हौँ ।
पूरै जिम्मेवारी पूरा गरेनन् त म भन्दिन । विशेष गरी भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनामा काम भएको छ । जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । तर, हाम्रो योजना बनाउने क्रममा नै बिग्रिएको छ । भेरी–बबईको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी सुरुङ खन्नेतर्फ लाग्यौँ, तर बाँध र विद्युत्गृह बनाउनेतर्फ लागेनौँ । सुरुङ खनेर भ्याएर मात्रै बाँध र विद्युत्गृह बनाउन लाग्यौ । राम्रै काम भएको परियोजनामा पर्छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा राम्रो काम भएको त देखिन्छ, तर तोकिएको समयका पूरा भएन, फेरि पनि म्याद थप भएको छ । तै पनि राम्रै काम भएको छ । पोखरा काम भएकै योजना हो ।
काम नभएको पश्चिम सेती छ । काम नभएको निगगढ हो । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । केही ढिलो भएको छ, तर रोकिएको भने होइन, बूढीगण्डकीको मुआब्जाको कुरा छ । पहिले बढी हल्ला ग¥यौंँ । नेपालीको अपेक्षा भने सरकारी भनेपछि बढी लिऔँ भन्ने हुन्छ । मुआब्जा घोषणा त भयो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाए । पुनरावलोकन समिति पनि बनेको छ । स्थानीयवासीले मुआब्जा लिनका लागि दर्ता पनि भइराखेको छ । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । रु १३ अर्ब जति मुआब्जाका लागि विनियोजन भएको छ । नौ÷१० अर्ब वितरण पनि होला । अर्को सालबाट कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । निजगढको विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्ला । केहीको आयोजना बनाउनु नै हुन्न भन्ने छ, तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ को सरकार भने राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छ । हामी त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा नै छौ । काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ, भई पनि राखेको छ । तर, लक्ष्यअनुसार भएको छैन ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हाम्रो सकारात्मक सन्देश भने नेपाल जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट माथि गयो भन्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि थप सहज बन्छ । हामी पनि विकासशील देश भइसकेका छौँ भन्ने हुन्छ । आफ्नो काम आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । सधैँ मागेर देशको विकास हुँदैन भन्ने हुन्छ । आफ्नै पैसा प्रयोग भएपछि पैसा चलाउनेमाथि अलिक बढी दृष्टि दिने कुरा होला । अहिले त कस्तो छ भने दुनियाँलाई कहाँबाट पैसा आएको छ भन्ने पनि थाहा छैन । राज्यले गरेका हरेक काममा के गरिरहेको छ । आफूले तिरेको राजश्व कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि आम जनतामा चासो रहन्छ । दबाबमा परेकाले काम पनि बढी हुन्छ । त्यसकारण यसका सकारात्मक नकारात्मक सबै पाटो हुन्छन् । हामी आशावादी भएर जाने हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै स्वीकृति दिएन भने अर्को कुरा भयो, तर हामी सन् २०२२ मा विकसित हुने अवस्थामा जाने हो । माथि उक्लेपछि आउने समस्याका बारेमा अहिल्यै तयार भएर बस्ने भनेर हामी लागेका छौँ ।
१५औँ योजनाको आधारपत्रले कहिले पूर्णता पाउँछ ? आयोगको के छ तयारी ?
बेलाबेलामा आयोग नै चाहिँदैन भन्ने पनि आउँछ । यो सिद्धान्ततः मिल्दैन । विशेष गरी दुई प्रकारका ‘स्कुल अफ थट’ छ । एउटा विचारमा सबै मार्केट केन्द्रित भएर जानुपर्छ, उसैलाई छाड्नुपर्छ भन्ने छ । ‘अल थिंग्स आर डन बाई माकेर््ट’ भन्ने छ । अर्को सिद्धान्त भनेको राज्य नै विकासमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने छ । राज्यले विकासको नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील देशका लागि बजारलाई मात्रै छाडेर विकास अगाडि जाँदैन । त्यो सिद्धान्तमा जाँदाको परिणाम हामीले देखिभोगी सकेका छौँ । हामी द्वन्द्वमा फस्याँै, के के भए । त्यसैले हाम्रा काममा ढिलाइ हुँदै गए । आयोजनाको हालत देखिएकै छ । संविधानले हामीलाई भनेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेपछि त्यसले योजना माग्छ नै । तपाईंसँग स्रोत सीमित छ र आवश्यकता अथाह छ भने प्लानिङ जरुरी हुन्छ । विकसित, अल्पविकसित वा समाजवाद उन्मुख देश भनौँ प्लानिङलाई डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्न । त्यसलाई नकारेर जान सक्नुहुन्न । राज्यले केही गर्न सक्दैन, गर्नुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त बोकेकाले आयोग चाहिँदैन भन्ने देखेको छु मैले । अर्को थरीले नबुझेर भनेको देख्छु । एउटा बुझीबुझी भन्ने अर्को नबुझेर भन्ने अवस्था छ । नबुझेर भन्नेले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानले दिएको कार्यादेश भनेकै समाजवादमुखी भएर जाने भन्ने हो । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने त्यसलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना योजना बनाउन सक्छन् । हामीले दिगो विकास लक्ष्यको कुरा गर्दा त्यसका लागि पनि योजना त बनाउनु नै पर्छ । हामीलाई एकवर्षे योजना, बजेट पनि चाहिएको छ । तीनवर्षे योजना विकासशील देशमा जाने पनि चाहिएको छ । पाँचवर्षे योजना बनाएकै छौँ । २५ वर्षे योजनाको प्रारुप पनि बनाएका छौँ । योजना आयोग नै चाहिँदैन भन्ने कुरा म मान्दिन ।
आयोगको संरचना अधिकार कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । बङ्गलादेशमा ‘प्लानिङ मिनिष्ट्री’ नै छ । हो, योजनामन्त्री बनाउन सकिन्छ । राम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने मेरो ठम्म्याइ छ किनभने अहिले प्रधानमन्त्री जहाँ पनि जानुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई समय छैन । जे चिज हो त्यो ‘क्याविनेट’मा भन्न सकिँदैन । हाम्रो र ‘क्याविनेट’को ‘स्पिरिट’ कहिलेकाहीँ ‘द्वन्द्व’ भएको देख्नु जुन हिसाबमा प्रोत्साहन हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । त्यसकारण भविष्यमा योजना आयोगलाई ‘प्लानिङ मिनिष्ट्री’का रुपमा विकास गर्नुपर्ने स्थिति देख्छु । अर्काे अर्थ मन्त्रालयका विषयमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयवीच विवाद भन्ने सुनिन्छ तर त्यो छैन । कामका क्रममा कहिलेकाहीँ ‘ओभरल्याप’ भएको देख्छु ।
आयोग ६३ वर्षको इतिहास भएको संस्था हो । तर के के सकारात्मक तथा नकारात्मक काम भए भन्ने ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ छैन । पुराना केहीसँग कुरा गरेर सङ्कलन गर्न थालेका छौँ । तर त्यो चाहे अनुसार हुन सकेको छैन र क्षमता पनि छैन । कहाँकहाँबाट सरुवा भएर आएका हुन्छन् । दुई÷तीन वर्ष बस्नुहुन्छ तालिम लिनुहुन्छ फेरि सरुवा भएर अर्को तिर जानुहुन्छ यहाँ त फेरि नयाँ आउँछ ।
अब योजना र तथ्याङ्कलाई क्रियाशील गराएर यसको क्षमता विकासमा जानुपर्ने देखिन्छ एउटा । अर्काे चाहिँ काम नगरेको भनेको चाहिँ अर्काे कारण हो पहिला यहाँ सातजना सहसचिव त्यहीअनुसारको उपसचिव त्यहीअनुसारको शाखा अधिकृत भएर यो ‘भाइव्रेट अर्गनाइजेशन’का रुपमा थुप्रै काम लिएर अघि बढेको संस्थाबीचैमा नीतिगतरुपमा केन्द्रिकृत गर्ने भनेर आधा दरबन्दी कटाइ दिएर यति मान्छे छन् त्यहीँ पनि सरुवा भएका हुन्छन् । आधा नयाँ आधा पुराना भएकाले काम गर्ने जनशक्ति र क्षमताको अभाव देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा योजना आयोग पुनःसंरचना गर्नुपर्ने छ । सोचाइ तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा छ, योजना आयोग के गर्दै छ ?
आयोगले यति बजेट बनाऊ भनेर मन्त्रालयलाई ‘सिलिङ’ दिन्छ । मन्त्रालयलाई सिलिङमा रहेर काम गर है भन्छ । दोस्रो काम प्रोजेक्ट बैंक बनाउने काम जारी छ । अर्काे मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । अहिले हामी यो तीनवटैमा काम गरिरहेका छौँ । समग्रमा बजेटको नीतिगत सल्लाह दिनुपर्छ । बजेट बनाउने जिम्मेवारी मूलतः अर्थ मन्त्रालयको हो । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो । हामीले आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन्छौँ ।
अहिले पनि करिब ४० लाख युवा विदेशमा छन् । रोजगारी खोज्दै गएका छन्, ती युवालाई फर्काउन नीतिगत र योजनागतरुपमा आयोगको भूमिका के छ ?
यसलाई द्वन्द्वात्मकरुपमा हेर्नुपर्छ । विदेशिएका सबै युवालाई देशमा राख्नुपर्ने दायित्व त हो । त्यसमा हामीले सोच्नुपर्ने के देख्छु भने अहिले हामीले क्रान्तिकारी भएर ठ्याक्कै रोक्ने भन्ने होइन । पोहोर आयात बढी भयो भन्नेमा कोकोहोलो थियो । त्यो बेलामा राजस्व मनग्य उठेको थियो । यो साल आयात घट्यो निर्यात बढ्यो भनेर सन्तोष गरिराखेका छौँ तर राजस्व घटिरहेको छ । यो सबै जोडिएको विप्रेषणमा हो । त्यस कारणले एकैपटक विप्रेषण घट्ने स्थिति बनायौँ भने अब हामी फेरि आर्थिकरुपले सबल हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण क्रमशः देशभित्र वातावरण निर्माण गर्दै उद्यमशीलताको विकास गरी प्रोत्साहित गर्ने गर्नुपर्छ । हामीले काम गरिरहेका छौँ । क्रमशः विदेशिनेको सङ्ख्या घटाउँदै जानुपर्छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको आगामी फागुन ३ गते दुई वर्ष पुग्दै छ । सरकार गठन भएको तीन महिनापछि उपाध्यक्षमा नियुक्ति हुनुभयो, यो अवधिमा कति गर्न सकेँ भन्ने ठान्नुभएको छ ?
म चाहिँ मिश्रित स्थितिमा छु । १०० प्रतिशत सन्तुष्ट छैन । मलाई बुझ्न केही समय लाग्यो । चाहेअनुसारको काम भएको भए योभन्दा अलि बढी गर्न सक्थेँ भन्ने छ । कसैलाई दोष पनि दिन चाहन्न । अलिअली यहाँको प्राणाली बुझ्न समय लाग्यो । उपाध्यक्षको पद भनेको ‘मल्टीसेक्टर’ जान्नुपर्ने खालको रहेछ । पुराना उपाध्यक्षले चाहिँ यसलाई ‘हटसिट’ भन्ने रहेछन् । हामीसँग पर्याप्त काम गर्ने मान्छे भएन समस्या चाहिँ यही हो । खासगरी कर्मचारीको अभाव रह्यो । झण्डै आधा दरबन्दी कटौती हुँदा काम चाहिँ करिब करिब उस्तै छ । अझै बढेको स्थिति छ । तहगत समन्वयको विषय नितान्त नयाँ छ । त्यसकारण सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौँ तर सन्तुष्ट छौँ । संविधानसँग जोडेर विभिन्न पार्टीका घोषणापत्र पढेका छौँ र सरकार जसले बनाएको छ त्यसको घोषणापत्रलाई हेरेर नेपालको आवश्यकता चाहनालाई हेरेर त्यसका आधारमा सकेसम्म राम्रो योजना बनाएका छौँ ।
केही दिनमा आधारपत्रलाई पूर्णता दिन्छौँ । अरु नियमित गर्नुपर्ने काम गरिराखेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयदेखि दिगो विकास लक्ष्यका कामलाई पनि उपयुक्त ढङ्गले लिएर गएका छौँ । प्रोजेक्ट बैंक, तहगत समन्वय, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नेतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौँ । अनुसन्धान र मूल्याङ्कनका पाटो जुन ढङ्गबाट अगाडि लैजानुपर्ने हो सोअनुसार लान सकेका छैनौँ । आयोगका आगामी दिन त्यसतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ । यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने हाम्रो सोच छ ।
आयोगको भूमिका र कामलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउछौँ । राष्ट्रिय गौरवलगायतका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने र थालेका परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा तदारुकताका साथ लागेको छौँ । ती परियोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा हामीलाई ‘गिल्टी’ महसुस भइरहेको छ । तर, यो अवधिमा हामीले पर्याप्त काम गरेका छौँ ।
अन्त्यमा यहाँले भन्नुपर्ने केही बाँकी छ ?
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एकदशक बाँकी छ । निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीयकरण गरेर जाने भनेका छौँ । यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘हाइ लेभल पोलिटिकल फोरम’मा स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन (भिएनआर) प्रस्तुत गर्ने भनेका छौँ । दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था के छ भनेर अध्ययन हुँदैछ । त्यस्तै अन्य अध्ययन पनि हुँदैछन् । त्यसलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भनेर अध्ययन हुँदैछ । केही दिनमा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौँ । मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्ने तयारीमा छौँ । त्यसको पनि काम भइरहेको छ जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यस्तै १५‍‍औँ योजनालाई ‘कस्टिङ’ गर्ने तयारीमा छौँ । १५औँ योजना अवधिमा कति लागत लाग्छ भनेर कस्टिङ गराउने काम भइरहेको छ । साह्रै आत्तिएर हतोत्तसाहित भएर हुँदैन । लामो सङ्क्रमणकाल गुज्रिएको छ । हामीले प्रणाली परिवर्तन गरेका छौँ, त्यो प्रणाली स्थिर हुनका लागि केही समय लाग्छ । अहिले त्यही समय गइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत सबैमा उत्साह छाएको छ । त्योअनुसार काम भइरहेको छ । आशा गरौँ, भविष्य सकारात्मक हुँदैछ ।
#डा पुष्पराज कँडेल
नोम चोम्स्की : भेन्टिलेटरको अभावमा देखियो नवउदार पुँजीवादको क्रुर अनुहार
अघिल्लो चोटि फेल भए पनि अब पास हुन्छु : किशोर प्रधानसँगको अन्तरवार्ता
‘देउवाको विकल्पमा पहिलो म नै हो’
राप्रपा एकीकरणअघि पूर्वराजासँग भेटवार्ता भएको डा. लोहनीको खुलासा(भिडियोसहित)
कोरोना नियन्त्रण गर्न ‘मास टेस्टिङ’ जरुरी छ : डा. अमर नागिला (अन्तरवार्ता)
‘अब कोरोनाको आर्थिक असर न्युनीकरण गर्न सरकारले व्यवसायीलाई छुट दिनुपर्छ’
देशभरका १० स्थानबाट कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण शुरु (स्थानसहित)
देशभर १ सय ७ आइसोलेसनमा, ९ हजार एकसय ६८ जना क्वारेन्टाइनमा
कैलालीका कोरोना संक्रमित युवासँगै आएका दाङका सात युवा अस्पतालमा, स्वाब लिने तयारी
सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीसहित १२० जना क्वारेन्टाइनमा
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस